Kitra – Fifanintsanana faritra Afrika: tafiditra anaty vondrona amin’ny « Mondial » ny Barea | NewsMada
Notsaraina amin’ny dingana sy ezaka vitany. Namoaka ny fomba hanatanterahana ny fifanintsanana, hiadian-toerana amin’ny «Mondial 2022 », hatao any Quatar, ho an’ny faritra Afrika, ny federasiona iraisam-pirenen’ny baolina kitra (Fifa). Fantatra fa miditra anaty vondrona avy hatrany ny Barea.
Tsy anisan’ireo hiatrika ny lalao savaranonando intsony ny Barea de Madagascar, fa hiditra avy hatrany eo amin’ny fifanintsanana isam-bondrona. Anisan’ny anton’izany ny laharana misy azy amin’izao fotoana izao. Miisa 26 ireo ekipam-pirenena tsy manao intsony ity savaranonando. Anisan’izany i Sénégal, RD Kongo, Tonizia, Alzeria, Maraoka, Ghana, Kameronina, Egypta, Borkina Faso, Kongo, Ghana, Côte d Ivoire, Ginea, Afrika Atsimo, Cap vert, Oganda, Madagasikara, Zambia, Bénin, Niger, Maoritania, Gabon, Kenya, Lybia, Zimbaboe, Mali.
Hotanterahina ny 27 jolay ho avy izao, ny antsapaka ho an’ireo hiatrika ny dingana voalohany na ny lalao sakana, hiadian’ireo firenena 28 ratsy toerana indrindra. Tafiditra ao anatin’izany i Somalie, Erythrée, Djibouti, Seychelles, Sao Tomé, Tchad, Soudan atsimo, Gambie, Nosy Maorisy, Libéria, Etiopia, Kaomoro, Botsoana, Lesotho, Eswatini, Ginea ekoatorialy, Roanda, Borondi, Sodan, Togo, Malawi, Angola, Ginea Bisao, Mozambika, Sierra Leone, Namibia, Centrafrique, Tanzanie. Hiatrika lalao mandroso sy miverina izy ireo ka hanampy ireo ekipa 26 misy ny Barea ireo 14 tafavoaka ao amin’io lalao sakana io, manao ny lalaom-bondrona.
Hiatrika ny lalaon’ny Nosy sy ny Chan
Hozaraina ao anaty vondrona 10 misy ekipa 4 avy izy ireo avy eo. Hanao ny lalao sakana faharoa, mandroso sy miverina ny firenena 10 mpandresy amin’ireo. Hiatrika ny “Mondial 2022” kosa ireo dimy voalohany, amin’izany.
Mandram-piandry izany, hiatrika ny lalaon’ny Nosy amin’ny herinandro ho avy io ny Barea iray ary ny Barea, tsy ahitana ireo matihanina sy mpila ravinahitra kosa, handray anjara amin’ny Chan. Hifandona amin’i Mozambika afaka herinandro izy ireo.